Ingaba Ukupenda Kweoli Kufuneka Kufakwe I-Glass?
Ngaba Udweba lweoli kufuneka lufakwe phantsi kweGlasi?
Qaphela ukuba Kutheni i-Glass ayisoloko ifunekayo
Ngaba kunconywa okanye kuyimfuneko ukubeka ipeyinti yeoli ngaphantsi kweglasi? Nangona kungenakudingeka kwaye kungasetyenziswanga ukusetyenziswa ngamafutha, kukho iziganeko ezimbalwa apho ufuna ukufaka igalazi kwisakhelo sakho.
Akukho mfuneko yokwenza ipeyinti yeoli ngaphantsi kweglasi xa ipeyinti kwinqanawa, ipaneli, okanye ibhodi. Iglasi lisetyenziselwa ukukhusela umzobo ovela kumswakama kunye nemimitha engabonakaliyo ye-UV engakwazi ukutshabalalisa imibala.
I- verarnish yokugqibela esetyenziswa kwipeyinti yeoli igqithiselwa ukukhuselwa ngokwaneleyo.
Khumbula: Ukudweba kweoli akufanele kuhlanjululwe ubuncinane kweenyanga ezintandathu emva kokuba kugqityiwe ukuqinisekisa ukuba ipende iyomile.
Unokubona iingubo ezimbalwa zeepile emva kweglasi kwiimyuziyam okanye kwigalari. Oku kusetyenziselwa ngokuyinhloko njengokhuseleko olongezelelweyo ekuchasweni kwezinto eziyimpawu ezibalulekileyo zobugcisa. Ngamanye amaxesha, iglasi ekhethekileyo yeglasi - edlalwa ngokuba yindalo okanye i-glass museum - isetyenziselwa ukongeza ukhuseleko olungakumbi ekukhanyeni kunye nezinye iiglasi ziquka ukugubungela okunciphisa ukucinga.
Nangona akudingekile ukubeka iingubo ezininzi zeeyile ngeglasi, zikhona izinto ezimbalwa. Ukuba umzobo wakho wenziwe kwikhasi okanye kumakhadi amancinci, ukongeza igalazi kwisakhelo kuya kukhusela inkxaso . Ipeyinti yeoli ayifuni ukukhuselwa, kodwa iphepha liyakwenza.
Ukuba uthatha isigqibo sokubeka umzobo weoli emva kweglasi, qiniseka ukuba uquka umtya (obizwa ngokuba ngumthi oqingqiweyo).
Ama-Mats ayimfuneko ebalulekileyo yokuqulunqa kwaye ihamba ngaphezu kokungenisa intle yokuchukumisa.
Umtya ubalulekile kuba ungeze isikhala phakathi kweglasi kunye nemisebenzi, yingakho bahlala besetyenziswe ngomsebenzi oqhekeza njengezithombe kunye namanzi okuvumba. Esi sikhewu esongezelelweyo sivumela ukujikelezwa komoya kunye nokuvimbela ukulungiswa okubangakho ukukholisa, ukubunjwa okanye ukukhupha.
Ukwenza imidwebo, umatshini uyaqinisekisa ukuba upende aluthinti okanye unamathele kwiglasi. Ukuba umzobo uphethiweyo oluninzi, qinisekisa ukuba ukulinganisa kunomthi.
Izinketho zokwenza ipeyinti yeoli
Ekubeni igalazi ayilunconywanga, uyilungisa njani ioli? Kukho ezininzi iindlela zokwenza izinto ezikhoyo kwioli, kwiplanga, kunye nepaneli:
Namathisela isakhelo phambi kwendlu .
Honga inqanawa okanye ibhodi ukuya kwisakhelo esintantayo.
Yeka isakhelo ngokupheleleyo (edlalwa ngokuba yigalari ). Kufuneka uqinisekise ukuba i-tovas yakho ifakwe kakuhle kwaye ingafuna ukuqhubela phambili umzobo wakho kumgca wecala ojikelezayo.
Iintlobo zeePayipi ezifanele zifakwe ngeGlasi
Ipeyinti yeoli iyomnye weentlobo ezimbalwa zemizobo engayifuni iglasi xa iqulunqwe. Ama-acrisi e-Varnished nawo alandela 'ingekho iglasi' isincomo. Ukuba usebenza namanye ama-medium, kubalulekile ukwazi ukuba luhlobo luni lokucetywa olucetyiswayo.
Umsebenzi ophakanyiswayo ngeglasi:
Nayiphi na umsebenzi ephepheni okanye inkxaso efanayo.
Abadluli kunye namanzi.
Imidwebo ipencil, amalahle, kunye nokufanayo (kakhulu abasengozini).
Ngaba Ndiyakwenza Ipeyinti kwiPhepha le-Watercolor nge-Acrylic?
Iingcebiso zokumisela i-Life Still Still: Ingxenye 1
Iingcebiso zokugcina ii-Acrylics Ukusuka ekulileni ngexesha loPain Air Painting
I-Shaolin Monks neePirates zaseJapan
Ukusebenzisa iDrawlocation Dictionary ukuphucula iNgesi yakho
Izinto ezili-25 eziPhambili kunazo zonke zokuphila emhlabeni